Oday Soomaaliyeed oo u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar uu ku qaaday wiil… – Hagaag.com
Oday Soomaaliyeed oo u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar uu ku qaaday wiil…
Posted on 21 Nofeembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Oday Soomaaliyeed oo 75 jir ahaa oo lagu magacaabay Shirwac Hassan Jibril ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar uu ku qaaday wiil madow ah kadib markii ay ku dhex murmeen bas ka dhex shaqeeya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, USA.
Leroy Davis-Miles oo 23 jir ah ayay boolisku u soo qabteen fal-dambiyeedkan uu ku baxay awoowe Shirwac kaas oo dhacay labo isbuuc ka hor, waxaana ay wararku sheegayaan in oday Shirwac uu soo fuulay bas ay saarnaayeen dhallinyaro uu ka mid ahaa Leroy kuwaas oo ku dhex qeylinayay baska, markii uu ka codsaday in ay buuqa yareeyaana la hujuumay.
Awoowe Shirwac markii uu baska uga dagay halka loo yaqaan Chicago-Lake Transit Center, ayay dhallinyaradu ka daba dageen, waxaana wiilka iminka la soo xiray uu wajiga feer kaga dhuftay oday shirwac kaas oo dhulka durba ku dhacay.
Leroy ayaa asxaabtiisa xabadka-xabadka u saaray kadib markii uu feer dhulka la dhigay awoowe Shirwac, waxaana asxaabta qaar ay markaasi bilaabeen in ay baartaan jeebabka awoowe Shirwac ka hor inta aysan goobta ka baxsan.
Awoowe Shirwac oo isbitaalka Hennepin County Medical Center loola cararay ayaa maalmo kadib ku geeriyooday halkaasi, waxaana ay boolisku sheegeen in uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray dhanka madaxa iyo maskaxda.
Booliska ayaa sheegay in ninka ay u hayaan fal-dambiyeedkan lasoo taagi doono maxkamad, iyagoona la kaashan doona Hennepin County Attorney’s Office.
Awoowe Shirwac ayaa ifka kaga tagay 8 carruur ah iyo 7 uu awoowe u ahaa, waxaana lagu sheegay xilliga la weeraray uu ka yimid dhanka masjidka oo uu kusoo tukaday mid ka mid ah salaadaha.
Warar la isla dhex marayo ayaa sheegaya in ay jiraan xiisado horay ugu dhexeeyay Soomaalida iyo madowga Mareykanka ah ee magaalada Minneapolis, waxaana booliska oo dhowr jeer oo hore kala dhex galay ku wargeliyay Soomaalida in ay ka leexdaan madowga Ameerikaanka ah.